Front view of the school – Designed by Spine Architects & UCSD Structural Engineers Group
ODF Myanmar has been providing aids to the flood victims. Together with Rakhine Thahar organization, our team of volunteers has been working relentlessly to reach out to the victims in Rakhine state. The aids have been extended to other affected regions such as Nge Le and Pann Chat villages in Sidoktaya township from Magway region, Sitha and other villages in Kalay township, Hakha, Tidim and Tonzang towhships from Chin state.
The place where the new school will be built
As part of our organization’s rehabilitation effort, we are working together with Spine Architects and UCSD Structural Engineers Group to buildaflood resilient school in Minn Phoo village in Minbya township, Rakhine state. The building design is donated by Spine Architects http://www.spinearchitects.com and UCSD Structural Engineers Group.
That Minn Phoo village was flooded entirely due to the recent flood. Which is why the building we are going to build will serve both asaschool and flood-resistant shelter.
The building will have an area of 60×40 square feet. It will beatwo-story building and will be able to accommodate up to 200 students. It will be able to withstand the water level up to 15 feet. The roof can serve asashelter when the water level increases up to 25 feet.
Bird-Eye view of the flood resilient school
The estimated cost for the building is about 35 millions kyats (35,000,000 kyats). As an initial fund, ODF Myanmar is going to use 10 millions kyats (10,000,000 kyats) and 1,300,000 kyats from Spine Architects, & 100,000 kyats from Ma Win Mon Mon Lwin (UCSD). The project funding still hasalong way to go – we are 25 millions kyats short from the goal. Hence, we would like to reach out to the organizations, foundations, companies and individual donors in order to complete this project together.
For organizations and individuals who are interested in building such disaster resistant buildings for any flood-affected areas, we will provide the structural design. We can be easily reached via email at thanzawmyo@spinearchitects.com and admin@odfmyanmar.org.
If you would like to contribute for this project, you can donate to our bank accounts, 066-6-025032 (DBS Saving Plus) for Singapore and 0038201010014058 (AYA Bank) for Myanmar. For further details, you can visit our ODF Myanmar Facebook page. Should you have further inquiry, you can reach us via admin@odfmyanmar.org or Ko Nyein Chan Htwe (+959 253688885), Ko Than Zaw Myo (+959 4580 44014) and Ma Pon Gyi (+659 8976282). Thank you.
မြန်မာပြည် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် မိမိတို့ ODF Myanmar အဖွဲ့အနေဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့၊ ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်လိုအပ်ချက်များအတွက် ရခိုင်သဟာယအသင်း ၊ မကွေးမြို့နယ် စေတုတ္တရာမြို့နယ်ရှိ ငလဲ့ရွာနှင့်ပန်းချက်ရွာများ ၊ ကလေးမြို့နယ် စည်သာရွာနှင့် အခြားအကူအညီလိုအပ်သည့်ရွာများ ၊ ချင်းပြည်နယ် ဟားခါး၊ တီးတိန်နှင့် တွန်းဇံမြို့နယ်များအတွက် ကူညီခဲ့၊ ကူညီနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် Spine Architects http://www.spinearchitects.com ၊ UCSD Structural Engineers Group တို့နှင့် လက်တွဲ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ မင်းဖူးကျေးရွာတွင် ရေဘေးဒဏ်ခံ စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးရန် စီစဉ်နေပါသည်။ အဆောက်အဦပုံစံရေးဆွဲခြင်းကို Spine Architects http://www.spinearchitects.com ၊ UCSD Structural Engineers Group တို့မှ လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ မင်းဖူးကျေးရွာသည် လတ်တလောရေကြီးမှုဒဏ်ကြောင့် တစ်ရွာလုံးရေအောက်ရောက်ခဲ့သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ ဆောက်လုပ်မည့် ကျောင်းဆောင်သည် စာသင်ကျောင်းအဖြစ်လည်းကောင်း ရေဘေးဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ရေကြီးလာလျှင် ခိုလှုံနိုင်စရာ ခိုကိုးရာအဖြစ်လည်းကောင်း ပုံစံရေးဆွဲထားပါသည်။
ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အဦသည် ပေ ၆၀ ပေ ၄၀ ပတ်လည် ကျယ်ဝန်းပြီး နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်၍ ကျောင်းသားပေါင်း ၂၀၀ ခန့် ပညာသင်ကြားနိုင်ပါမည်။ အကယ်၍ ရေတက်လာလျှင် ရေအမြင့် ၁၅ ပေခန့်အထိ လွတ်ကင်းမည်ဖြစ်ပြီး ရေထပ်တက်လာလျှင် အပေါ်ဆုံးအမိုး ၂၅ ပေအမြင့်တွင် ခေတ္တ ခိုလှုံနိုင်ပါမည်။
အဆောက်အဦအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်သည် မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၃၅၀ ခန့် ဖြစ်ပါသည်။ ODF Myanmar အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းသောငွေ သိန်း ၁၀၀ ၊ SpineArchitects မှ ၁၃ သိန်း၊ မဝင်းမွန်မွန်လွင် (UCSD) မှ ၁ သိန်း ဖြင့် အဆိုပါကျောင်း စတင်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မတည်မည့်အကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ကျောင်းဆောင်ဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် နောက်ထပ် သိန်း ၂၅၀ ခန့် လိုအပ်နေသေးသဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အလှူရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၏ အကူအညီများကိုလည်း တောင်းခံလိုပါသည်။
ထို့အပြင် အခြားဒေသများတွင် စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းလိုသောသူများအနေဖြင့်လည်း thanzawmyo@spinearchitects.com ကိုဖြစ်စေ၊ admin@odfmyanmar.org
ကို ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ အဆောက်အဦပုံစံကို အလှူခံနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဘဏ်စာရင်း 066-6-025032 (DBS Saving Plus) သို့ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်စာရင်း 0038201010014058 (AYA Bank) သို့ လည်းကောင်း အလှူငွေများ ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ODF Myanmar Facebook page သို့မဟုတ် admin@odfmyanmar.org ထံသို့ဖြစ်စေ၊ ကိုငြိမ်းချမ်းထွေး (+959 253688885) ၊ ကိုသန်းဇော်မျိုး (+959 4580 44014) ပုံကြီး (+659 8976282) ထံ ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Let us share the detailed information on the balance sheet on Disaster Assistance Programs by ODF Myanmar donors.
Note: This balance sheet is to be updated accordingly because of ongoing donation processes and upcoming projects.
MYANMAR, KALAY : An aerial view shows floodwaters inundating houses and vegetation in Kalay, upper Myanmar’s Sagaing region, on August 2, 2015. The toll from flash floods and landslides in Myanmar after days of torrential rain is likely to spike, the UN warned August 2, as monsoonal downpours brought misery to thousands across the region. AFP PHOTO / Ye Aung THU
Let us update on offering helping hands for flood victims. By 31st July, ODF Myanmar has collected about 9000SGD for making donations in flooded areas.
On 4th August (Tuesday), ODF Myanmar ground team members are going to donate drinking water and water purification powder in flooded villages where emergency aids are still in need. According to increased flooded areas and increased number of flood victims, ODF Myanmar is, aiming for resettlement of flooded areas, planning to arrange another donation event to flooded areas after this event.
Please be informed that we have extended till 31st August to collect donations for second donation event and let us show our warm appreciation and gratitude towards our donors and friends who immensely helped around in making donation events happen in suchashort period of time!
Donors from Singapore and other countries can transfer contributions to ODF Myanmar bank account: 066-6-025032 (DBS Saving Plus) – Singapore and those from Myanmar can make transfer to ODF Myanmar bank account: 0038201010014058 (AYA Bank) – Myanmar. For further enquiries, please dropamessage to ODF Myanmar Facebook page or contact Ko Nyein Chan Htwe (+959 253688885) , Ko Than Zaw Myo (+959 4580 44014) and Pon Gyi (+65 98976282).
ရေဘေးကူညီမှုအတွက် ODF Myanmar အဖွဲ့မှ ဇူလိုင်(၃၁)ရက်အထိ S$9000ခန့် ကောက်ခံရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ODF Myanmar အဖွဲ့ သားများမှ သြဂုတ်(၄)ရက်နေ့(အင်္ဂါနေ့ )တွင် အကူအညီရှားပါးသေးသော ရေဘေးသင့်ကျေးရွာများသို့ရေနှင့် ရေသန့် ဆေးမှုန့် အဓိကထားပြီး သွားရောက်လှူဒါန်းပါမယ်။
ယခု ရေဘေးအခြေအနေအရ ရေဘေးသင့်ဒေသနှင့် ရေဘေးသင့်ပြည်သူဦးရေ တစစများပြားလာမှုကြောင့် ODF Myanmar အနေဖြင့် ရေဘေးသင့်ဒေသများ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ယခုအကြိမ်လှူဒါန်းမှုအပြီးတွင် နောက်တကြိမ်ထပ်မံလှူဒါန်းရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ်အတွက် အလှူငွေများကို သြဂုတ်(၃၁)ရက်နေ့ အထိ ထပ်တိုး ကောက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အလှူအစီအစဉ်များ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အချိန်တိုအတွင်း အဘက်ဘက်မှ အင်တိုက်အားတိုက် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြသော အလှူရှင်များ၊ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ODF Myanmar မောင်နှမများမှ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဘဏ်စာရင်း 066-6-025032 (DBS Saving Plus) သို့ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်စာရင်း 0038201010014058 (AYA Bank) သို့ လည်းကောင်း အလှူငွေများ ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ODF Myanmar Facebook page အား message ပို့ ၍ဖြစ်စေ၊ ကိုငြိမ်းချမ်းထွေး (+959 253688885)၊ ကိုသန်းဇော်မျိုး ((+959 4580 44014)) ပုံကြီး (+659 8976282) ထံ ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Dear our friends and donors,
According to our mission to reach our help to different places in Myanmar as much as possible, we have chosen “Doe Pin Aung Kan Thar” benevolent youth development monastery near Pyin Oo Lwin, Mandalay Division asaplace to make contributions for May and June, 2015 donation (50th monthly donation) plan.
The monastery is located by Mandalay – Pyin Oo Lwin highway and is taking care of more than 1,000 orphans from cyclone Nargis and orphans from different ethnics.
ODF Myanmar has made donations to this monastery for two times, in 2010 June and 2012 November, and we would like to choose it for the third time donation due to the increased number of orphans and the increased needs at the monastery.
Therefore, we would like to encourage all of you to cooperate with ODF Myanmar to make contributions as in previous months.
Please be informed that donations will be collected till 30th June 2015 and contributions can be made through official ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers) or to ODF Bank Accounts (Singapore & Myanmar). For detailed information, please visit our websitehttp://odfmyanmar.org/donate/.
Many thanks to our donors and friends!
မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါ။
မြန်မာပြည်အနှံ့ ရှိ အကူအညီလိုအပ်နေသော နေရာများသို့တတ်နိုင်သလောက် ပံ့ပိုးကူညီပေးမည့် ODF Myanmar ၏ မူအတိုင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလနှင့် ဇွန်လ အလှူ (အကြိမ် ၅၀မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိ “ဒိုးပင် အောင်ကံသာ” ပရဟိတ လူငယ်ဖွံ့ ဖြိုးရေးကျောင်းအား ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသော ကလေးသူငယ် ၁၀၀၀ကျော်နှင့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား မိဘမဲ့ကလေးငယ်များအား စောင့်ရှောက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
ODF Myanmar အနေဖြင့် အဆိုပါကျောင်းအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာတို့ တွင် လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျောင်းတွင်း ကလေးဦးရေများပြားလာသဖြင့် အထောက်အပံ့အကူအညီများ လိုအပ်နေမှုကြောင့် တတိယအကြိမ် လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် အလှူရှင်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်များ ODF Myanmar နဲ့ ပူးပေါင်း၍ ယခင်လများသကဲ့သို့ ပင် တတ်အားသရွေ့ လှူဒါန်းကူညီကြရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၅ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလှူငွေများကို ODF volunteer (http://odfmyanmar.org/volunteers) များထံသို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ODF ဘဏ်စာရင်းများသို့ လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို http://odfmyanmar.org/donate/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အလှူရှင်များအားလုံးနှင့်တကွ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
2015 January & February Donation Event
2015 Jan & Feb Event
We are very pleased to announce that we have donated 800,000 Kyats to “Chan Myae Nunnery Post-Primary Education Center” in Waingmaw, Myitkyina District, Kachin State – as our 49th monthly donation for January and February 2014.
The center was established by Abbess Daw Pandita Mitzuri in 2008-2009 academic year.
At the center, orphans from different ethnic groups and orphans of war most of whom are from Pa-Oh, Kachin, Shan and Burmese ethnics are being taken care by 36 nuns.
Among 155 students, including both boarding students and day students, those from kindergarten and sixth grade are being taught by7teachers at school and those from seventh grade and matriculation level are sent to public schools.
Our big thanks to the donors and friends who offered hands and contributed for Chan Myae Nunnery Post-Primary Education Centre. Thank you!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ အလှူ (၄၉ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ)အဖြစ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ဝိုင်းမော်မြို့ ရှိ နယ်စပ်တောင်တန်း သာသနာပြု “ချမ်းမြေ့ ပရဟိတ သီလရှင်သင် ပညာရေးမူလတန်းလွန်ကျောင်း” ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေ စုစုပေါင်း မြန်မာငွေ ကျပ် ရှစ်သိန်း ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ပရဟိတကျောင်းအား ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဒေါ်ပဏ္ဍိတမဉ္ဇူရီ မှ ဦးစီး၍ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းတွင် သီလရှင် (၃၆)ပါး သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိပြီး တောင်ပေါ်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားမိဘမဲ့ကလေးငယ်များနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များအား စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိရာ ကလေးငယ်အများစုမှာ ပအို့ဝ်၊ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားနှင့် အပြင်နေကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၅၅)ဦးအနက် သူငယ်တန်းမှ ဆဌမတန်းအထိ ကျောင်းသားများအား ကျောင်းတွင် ဆရာမ(၇)ယောက်မှ ဦးစီး၍ ပညာသင်ကြားပေးလျက် ရှိပြီး သတ္တမတန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိ ကျောင်းသားများအား အပြင်ကျောင်းသို့စေလွှတ်၍ ပညာသင်ကြားစေပါသည်။
ချမ်းမြေ့ ပရဟိတ သီလရှင်သင် ပညာရေးကျောင်း အလှူအတွက် ငွေအား၊လူအား ကူညီကြသော အလှူရှင်များ၊ မိတ်ဆွေများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
2015 January & February Donation Plan
2015 Jan & Feb Plan
As the venue for January and February, 2015 donation (49th monthly donation) plan, ODF Myanmar has chosen “Chan Myae Nunnery Post-Primary Education Center” which is located in Waingmaw, Myitkyina District, Kachin State.
An approximate expense for food of one child, for3mealsaday, is 20,000 Kyats per month.
Currently, the center is planning to extend its school buildings for seventh and eight Grades which would include classrooms, learning rooms and teachers’ common room and therefore ODF Myanmar has chosen the place to contribute as much as we can.
Please be informed that donations will be collected till 8th March 2015 (Sunday) and contributions can be made through official ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers) or to ODF Bank Accounts (Singapore & Myanmar). For detailed information, please visit our websitehttp://odfmyanmar.org/donate/. Many thanks to our donors and friends!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ အလှူ (၄၉ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ)အဖြစ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ဝိုင်းမော်မြို့ ရှိ နယ်စပ်တောင်တန်း သာသနာပြု “ချမ်းမြေ့ ပရဟိတ သီလရှင်သင် ပညာရေးမူလတန်းလွန်ကျောင်း” သို့လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
ကျောင်းတွင် သီလရှင် (၃၆)ပါး သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိပြီး တောင်ပေါ်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားမိဘမဲ့ကလေးငယ်များနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များအား စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိရာ ကလေးငယ်အများစုမှာ ပအို့ ဝ်၊ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကလေးငယ်များအတွက် ပျမ်းမျှစားစရိတ်မှာ တစ်နေ့(၃)နပ်နှုန်းဖြင့် တစ်ယောက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ တစ်လ နှစ်သောင်းကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ လတ်တလောတွင် သတ္တမတန်းနှင့် အဌမတန်းတို့အတွက် စာသင်ခန်း၊ စာကြည့်ခန်းနှင့် ဆရာမများ နားနေခန်းများ ပါဝင်သော တိုးချဲ့ဆောင်များ ကျောင်းတွင် ဆောက်လုပ်လိုပါသဖြင့် အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိရာ ODF Myanmar မှ တတ်အားသရွေ့ လှူဒါန်းသွားရန် ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလှူငွေများကို ODF volunteer (http://odfmyanmar.org/volunteers) များထံသို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ODF ဘဏ်စာရင်းများသို့ လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို http://odfmyanmar.org/donate/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့်တကွ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
2014 September & October Donation Event
2014 Sep & Oct Donation Event
With great pleasure, let us announce that we received 2192 SGD (1,738,300 Kyats) for September and October, 2014 donation (47th monthly) plan which was dedicated to offer contributions to Lo Ta Ya Monastic Education Center in Hlaw Kar, Shwe Pyi Thar Township, Yangon. On behalf of our donors, the representative of ODF Myanmar donated the collected money on 18th November, 2014.
Beingaboys’ school, Lo Ta Ya Monastic Education Center is taking care of not only basic needs but also educational needs of Buddhist novices and orphans.
Currently, total of more than 100 students, including novices and orphaned students, are being looked after at the school and the school needs aids in providing basic needs to the students since there are onlyahandful of donors though the school is not far from Yangon.
Therefore we would like to extend our warm appreciation to all our donors and friends, who cooperated with us in offering helping hands Lo Ta Ya Monastic Education Center which gives support in life necessities and education to novices and orphaned students. We also share our merits to everybody. Thank you!
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာ အလှူ (၄၇ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှော်ကားရှိ “လိုတရ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်း” အား လှူဒါန်းရန်အတွက် အလှူခံခဲ့ရာ အလှူငွေ ၂၁၉၂ ဒေါ်လာ (၁,၇၃၈,၃၀၀ ကျပ်) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေများကို အလှူရှင်များကိုယ်စား ODF Myanmar အဖွဲ့ ၏ ကိုယ်စားလှယ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဘုန်းတော်ကြီးသင်စာသင်ကျောင်းမှာ ယောကျာ်းလေးသီးသန့်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ကိုရင်လေးများနှင့် မိဘမဲ့ကျောင်းသားလေးများ၏ စားဝတ်နေရေးသာမက ပညာရေးတို့ တွင် တာဝန်ယူပေးလျက် ရှိပါသည်။
လက်ရှိတွင် စာသင်သား ကိုရင်နှင့် ကျောင်းသား စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တို့ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့နှင့် အလှမ်းမဝေးသော်လည်း အလှူရှင်များ အရောက်အပေါက်နည်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ စားဝတ်နေရေးတွင် အကူအညီလိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။
ထို့ကြာင့် စာသင်သား ကိုရင်များနှင့် မိဘမဲ့ကျောင်းသားလေးများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပညာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသော “လိုတရ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်း” အတွက် စေတနာထက်သန်စွာ လှူဒါန်းကူညီကြသော မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မိမိတို့၏ အလှူဒါနကိုလည်း မိတ်ဆွေအားလုံးကို အမျှပေးဝေပါသည်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
2014 November & December Donation Plan
We would like to announce that ODF Myanmar has chosen “Eden Center for Disabled Children” which is located at 56, War Oo 4th Street, Phawkan Quarter, Insein Township, Yangon as the venue for November and December, 2014 donation (48th monthly donation) plan.
The center is opened asaday school for any disabled children, regardless of race, religion or social background, who are under the age of eighteen.
Currently, the center is in need of helping hands in building and educational and daily needs of the children and therefore ODF Myanmar has chosen the place to contribute as much as we can.
Please be informed that donations will be collected till 3rd January, 2015 and contributions can be made through official ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers) or to ODF Bank Accounts (Singapore & Myanmar). For detailed information, please visit our websitehttp://odfmyanmar.org/donate/. Many thanks to our donors and friends!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာ အလှူ (၄၈ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ)အဖြစ် အမှတ် (၅၆) ဝါဦး (၄)လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ “ဧဒင် မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ ပြုစုရာ ရိပ်မြုံ” သို့လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါ ရိပ်မြုံအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စတင် တည်ထောင်ချိန်တွင် ကလေး (၂၄)ဦးသာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကလေး စုစုပေါင်း (၁၆၅) ဦး (ကျား – ၁၀၀၊ မ – ၆၅) တို့ အား ပြုစုစောင့်ရှောက်လျက် ရှိပါသည်။
လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အဆင့်အတန်း မခွဲခြားဘဲ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အောက် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် နေ့ ကျောင်း အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရိပ်မြုံ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မသန်စွမ်းကလေးများနှင့် ဉာဏ်ရည်နိမ့်ကလေးများအတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး၊ ပညာရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးရေးနှင့် အခြား လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
လတ်တလောအနေဖြင့် အဆောက်အဦ၊ ကလေးများ၏ ပညာရေးနှင့် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များတွင် အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိသဖြင့် ODF Myanmar မှ တတ်အားသရွေ့ လှူဒါန်းသွားရန် ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလှူငွေများကို ODF volunteer (http://odfmyanmar.org/volunteers) များထံသို့ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ODF ဘဏ်စာရင်းများသို့ လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို http://odfmyanmar.org/donate/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့်တကွ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။